Maamulka Cusub ee Dugsiga Booxaaro Sheerbi iyo Maamulkii hore oo xilka loo kala wareejiyay. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maamulka Cusub ee Dugsiga Booxaaro Sheerbi iyo Maamulkii hore oo xilka loo kala wareejiyay.
Maamulka Cusub ee Dugsiga Booxaaro Sheerbi iyo Maamulkii hore oo xilka loo kala wareejiyay.
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay Deegaanka Sheerbi gaar ahaan gudaha dugsiga Hoose/Dhexe Sare ee Booxaaro Sheerbi ayaa xilka loogu kala wareejiyay maamulihii hore ee Dugsigaas Cabdiraxmaan Axmed Finiin iyo Maamulaha Cusub Jaamac Axmed Maxamed.
Gudoomiyaha Degmada Waaciye, Gudoomiyaha Waxbarasha Degmada Waaciye, Maamulka Deegaanka Sheerbi, Gudigga Waxbarashada, Aqoonyahan, Dhalinyaro, Macalimiin, Waalidiin iyo Kormeeraha Guud ee Wasaarada Waxbarashada Gobolka Karkaar ayaa ka qaybgalay Munaasabada.
Mustaf Abshir Gudoomiyaha Deegaanka Sheerbi iyo qaar ka mida waxgaradka oo ka hadlay Munaasabada waxay si qoto-dheer uga sheekeyeen marxaladihii ay soo martay waxbarashada deegaanka Sheerbi, Maamule Cabdiraxmaan Finiin oo 15 sano dugsigaan gacanta ku hayay ayaa si gaar ah looga mahadceliyay juhdigii uu ku bixiyay horumarinta Waxbarashada Deegaanka.
Gudoomiyaha Waxbarashada Degmada Waaciye iyo Gudoomiyaha Degmada Waaciye Isxaaq Axmed Xasan oo dhankooda hadlay waxay soo dhaweeyeen Maamulka Cusub iyagoo shacabka kula dardaarmey in lala shaqeeyo gacan wayna laga siiyo sidii loosii horumarin lahaa waxbarashada deegaanka Sheerbi.
Mahad Gacayte Kormeeraha Guud ee Wasaarada Waxbarashada Gobolka Karkaar oo ugu danbay xaflad xiray wuxuu sheegay in Wasaaradu ay masuuliyad adag iska saartay horumarinta iyo tayaynta tacliinta dugsiyada, Waalidiinta ayuu ugu baaqay in ay la shaqeeyaan Maamulka Iskuul iyo Gudigga Waxbarashada Deegaanka Sheerbi.
Gabagabadii Waxaa Shahaado sharaf la gudoonsiiyay dadkii kaalinta wayn ka qaatay hirgelinta iyo gacan ku haynta waxbarashada Deegaanka Sheerbi oo ay ugu horeeyaan maamulihii hore ee Iskuulka Cabdiraxmaan Finiin, Macalin Cabdiqaadir Saciid Maxamuud iyo Macalin Cali Laasbaar iyo Masuuliyiin kale.